Cap Vert: Nahoana No Misondrotra Ny Vidin’ny Solika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2018 5:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Manontany tena ilay capverdiàna blaogera, Neu Lopes, [amin'ny teny paortiogey] hoe nahoana no mbola mitohy misondrotra ny vidin'ny solika ao Cap Vert. Nahitana 21% ny fisondrotana farany tamin'ny solitany fandrehitra, 15% ho an'ny soliky ny fiara, 10% ho an'ny diesel, ary 5% ho an'ny entona fandrehitra, ary ankehitriny dia miandry ny mety ho fiantraikan'izany amin'ireo vidin'entana hafa ny mponina, indrindra fa efa nambara ny ho fiakaran'ny saran'ny fitaterana, ny herinaratra sy ny rano. Ary nitranga ireo fiakarana rehetra ireo raha toa ny vidin'ny solitany kosa nitontongana [amin'ny teny anglisy].
Araka ny voalazan'ny ARE (Agence de Régulation Économique) [amin'ny teny paortiogey], “ny solitany nafarana, izay ampiasaina ho toy ny refy entina hitazonana ny vidiny, dia novidiana fony mbola ambony be ny vidiny”. Ankehitriny manontany tena aho hoe: raha ambany ny vidiny nividianana an'io solitany io, inona no antoka ananantsika fa tsy mbola ho ambony lavitra ihany ireo vidiny ireo raha toa ny zavamisy iraisam-pirenena mikasika an'io vidiny io hifanohitra amin'izay efa eo ankehitriny? Sady amin'izay indray, ireo Capverdiàna no mamoaka vola am-paosy.
Mametraka fanontaniana hafa i Ludgerocv [amin'ny teny paortiogey] manao hoe:
Tamin'ny alalan'ny famoahana an'ireo vaovao mikasika ireo fihetsiketsehana fanoherana nokasaina hatao tao Paortogaly ny 27 septambra 2008 manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana, manoratra i Redy Wilson Lima [amin'ny teny paortiogey] fa tena efa fotoana izao ho an'ny mponina ao Cap Vert hanombohana miady amin'ireo fiakaran'ny vidin'entana ireo.
Nisarika ny sain'ny Governemanta ny Nos Praia [amin'ny teny paortiogey], tamin’ny 5 septambra 2008, mikasika ny filàna vahaolana maharitra. Tokony hitady fomba hampihenana ny fiankinandohany amin'ny solika i Cap Vert: